Top –4အဆင့်အထိတက်လှမ်းဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရရှိသွားနိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်(၄)ဦးကဘယ်သူတွေဖြစ်လဲ – Cele Gabar
ပရိသတ်တွေကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲရဲ့ပဏာမပြိုင်ပွဲကျင်းပကတည်းက စိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်အားပေးလာခဲ့ကြတာပါ။အခုဆိုရင်တော့ ဆန်ကာတင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ Top Finalist (၁၁) ဦးထဲက နောက်ဆုံး(၅)ယောက်သာကျန်တော့တာပါ။ဒီညကျင်းပမဲ့ Result Show မှာ ဆိုရင် နောက်ထပ်တစ်ဦးကအိမ်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီး Top –4လေးဦးသာကျန်တော့မှာပါ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Winner ဆုရရှိဖို့အခွင့်အရေးကိုနီးကပ်လာတာဖြစ်ပြီး အရမ်းကိုရင်ခုန်စရာကောင်းနေပါပြီနော်။Cele Gabar ပရိသတ်ကြီးကရော ဒီညမှာဘယ်သူကအိမ်ပြန်ရမယ်လို့ထင်ပါသလဲနော်….
Top –4အဆင့္အထိတက္လွမ္းဖို႔အတြက္အခြင့္အေရးရရွိသြားႏိုင္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္(၄)ဦးကဘယ္သူေတြျဖစ္လဲ
ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ျမန္မာအိုင္ေဒါၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ပဏာမၿပိဳင္ပြဲက်င္းပကတည္းက စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္အားေပးလာခဲ့ၾကတာပါ။အခုဆိုရင္ေတာ့ ဆန္ကာတင္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ Top Finalist (၁၁) ဦးထဲက ေနာက္ဆုံး(၅)ေယာက္သာက်န္ေတာ့တာပါ။ဒီညက်င္းပမဲ့ Result Show မွာ ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္တစ္ဦးကအိမ္ျပန္ရမွာျဖစ္ၿပီး Top –4ေလးဦးသာက်န္ေတာ့မွာပါ။တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ Winner ဆုရရွိဖို႔အခြင့္အေရးကိုနီးကပ္လာတာျဖစ္ၿပီး အရမ္းကိုရင္ခုန္စရာေကာင္းေနပါၿပီေနာ္။Cele Gabar ပရိသတ္ႀကီးကေရာ ဒီညမွာဘယ္သူကအိမ္ျပန္ရမယ္လို႔ထင္ပါသလဲေနာ္….
အနက်ရောင်ဖက်ရှင်နဲ့သိပ်ကိုဟော့နေတဲ့ ဖြူဖြူအိုင်ဒေါလ်ည (သို့) နက်နက်ကျော်သိန်း
“ကျောက်စိမ်းစက်ရုံတစ်ရုံလုံးကဝန်ထမ်းတွေကိုပါ ‘မြမြ’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ ညိုမင်းလွင်”